‘मौका नचुकाउ घरमै फर्क’ भन्दै डा भट्टाराईलाई नेपालआमाको भावुक पत्र « Sansar News
‘मौका नचुकाउ घरमै फर्क’ भन्दै डा भट्टाराईलाई नेपालआमाको भावुक पत्र
२३ जेष्ठ २०७४, मंगलवार ११:५२
बाबुराम धेरै माया, कुशलताको शुभकामना !
तिमी देश डुल्दै भाषण गरेको खबर मिल्यो। त्यति मात्र सुन्न पाउँदा पनि मलाइ खुशी लागेको छ कि तिमी आरामै छौ। तर बेखुशी त के मा छ भने तिमिले मेरो खुशी र भलोको लागि सोच्न सकेनौ। स्कुल पढ्ने समय देखि नै अलि आशा र भरोसा गर्न लायक सपूत जन्मेछ भनेर म खुशिले पुलकित हुँदै यतिका बर्ष दुख सुख केही नभनी प्रतीक्षा गरिबसेको कुरा तिमिलाइ पनि सम्झना होला । तर पछिल्लो समय तिम्रो चाला त्यति निको लाग्न छोडेको छ बाबू । अहिले खै के के हो नया शक्ति भन्दै हिडेका रहेछौ। तिमिले भनेको नया शक्तिमा केही नया छैन भनेर टोलटोलमा चल्ने गाइगुइ सुन्दा मलाइ चसक्क छातिमा सूल रोपे जस्तो हुन्छ । तिमी यत्रो बौद्धिक र राजनितिक बिरासत स्थापना गरिसकेको मान्छेले आफ्नो घरमा आगो लागाएर शत्तुर हसाएको देख्दा मलाइ कति पिडा भएको होला एकपटक पछाडी फर्केर हेर त। जान्ने सुन्ने भयो भनेर सन्तोष लिने बेलामा मलाइ किन यति लज्जित बनाउछौ ?
गणतन्त्र र संविधानसभाको मुल नारा लिएर लडाइँ मा होमिएका प्रचण्ड र तिमिलाइ देखेर लाखौं लाख मान्छेहरु कसरी तिमिहरुको पछाडी लामबद्ध भएका थिए ? पछाडी फर्केर इतिहास पढ त । त्यसो त तिमि आफै ईतिहास र राजनितिक अर्थशास्त्र को व्याख्या गर्ने ब्यक्तिलाइ कसले सिकाउनु पर्यो रु आफ्नो घरमा आगो लगाएर हिड्ने लाई कसैले पनि राम्रो मान्दैन बाबू। नराम्रो भए आफ्नो घर मरम्मत र सम्भार आफैले गर्ने हो।
पोहोर साल सम्बिधान जारी गर्ने बेला खै कुनचाही शरण आएर हाम्रा पिढि र मझेरिमा कति रडाको मच्चाउदा पनि तिमी नदेखे जस्तै, केही थाहा नपाए जस्तै गर्यौ। अझ त्यही संकटको बेला आधा देश रोएकोले दिपावली गर्न सक्दिन भनेर फलाक्दै हिंड्दा मलाइ कति पिडा भयो होला कल्पना गर त। त्यति बेला मलाइ पनि लागेको थियो कि अझै मेरा सबै सन्ततिहरुले गौरब र अपनत्व महसुस गर्ने खालको पुर्ण दस्ताबेज आइसकेको छैन। मौका आएपछी सबैलाइ चित्त बुझ्नेगरी हक हिस्सा मिलाउनु पर्ला भनेर मैले बाटो हेर्दा हेर्दै तिमी जस्तो ‘डाड साप’ भैसकेको मान्छेले के के पाइएन भनेर बाटो बिराउन हुँदैन थियो बाबू । सम्बिधान भनेको गतिशिल दस्ताबेज हो भनेर भासण गर्दै हिड्ने तिमी जस्तो बुज्रुकले जारी गर्ने बेलामा नै यसलाइ जलाउनु पर्छ भन्दै हिडेपछी मेरो मन कति छियाछिया भएको होला कल्पना गर त।
घर भाडेर हिड्ने ले कसैको भलो गर्न सक्दैन भनेर। धोका, आवेश र घरभांडा प्रबृतिले अरुलाइ दुख दिन र घर बिगार्न त सकिएला, सफल हुन सकिँदैन बाबु। अब जे हुनु भयो। जतिसुकै उफृए पनि कुवा को भ्यागुतो कुवा मै हुन्छ । यत्रो संकटमा पनि तिमिले गाली गर्दै छोडेको घरलाई प्रचण्ड लगायतका धेरै ले बचाइ राखेका छन। गल्ती सबैका हुन्छन। अझै पनि तिमिमा धेरै जोश जागर बाकी छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। गल्ती स्विकार गरेर घर फर्क।
गणतन्त्र र संविधानसभाको मुल नारा लिएर लडाइँ मा होमिएका प्रचण्ड र तिमिलाइ देखेर लाखौं लाख मान्छेहरु कसरी तिमिहरुको पछाडी लामबद्ध भएका थिए ? पछाडी फर्केर इतिहास पढ त । त्यसो त तिमि आफै ईतिहास र राजनितिक अर्थशास्त्र को व्याख्या गर्ने ब्यक्तिलाइ कसले सिकाउनु पर्यो रु आफ्नो घरमा आगो लगाएर हिड्ने लाई कसैले पनि राम्रो मान्दैन बाबू। नराम्रो भए आफ्नो घर मरम्मत र सम्भार आफैले गर्ने हो। के के नया शक्ति बनाउछु भनेर रबिन्द्र मिश्र लगायतको ढोका ढोका चहार्दै थियौ। हेर त आज साझा पार्टी कहाँ छ, बिबेकशिल पार्टी कहाँ छ अनि तिम्रो नया शक्ति कहाँ छरु तिमिलाइ अलिकती शरम पनि लाग्नु पर्ने हो। यत्रो चुनाब भयो, चुनाब अघि चिन्हको लागि बबन्डर मच्चाउदै कहाँ कहाँ कोकोहोलो गर्दै गयौ।
आजकल झन क-कसको पुच्छर समातेर आफ्नै घर तिर धारे हात लगाउदै छौ रे। अनि भुकम्पले भत्काएको थोत्रो घर भन्दै फलाक्दै छौ रे, के तरिका हो बाबू यो ? एउटा कुरा ख्याल राख्नु गधा र खच्चडको पुच्छर समातेर ज्यान सुरक्षित हुदैन। लात्ती हाने भने हात खुट्टा भाचिन्छन, नाक भाचिन्छ। के के हुन्छ के के। सके बलियो लौरी लिएर बाटो लाग्नु नत्र घरमै ओत लाग्नु। आफ्नो घरलाइ गाली बेइजती गर्नेलाइ कसले पत्याउछ ररु लीलामणि पौडेल, रबिन्द्र मिश्र, अनि अरु अरु ले पनि कुरा बुझिहाल्छन नि बाबू । घर भाडेर हिड्ने ले कसैको भलो गर्न सक्दैन भनेर। धोका, आवेश र घरभांडा प्रबृतिले अरुलाइ दुख दिन र घर बिगार्न त सकिएला, सफल हुन सकिँदैन बाबु। अब जे हुनु भयो। जतिसुकै उफृए पनि कुवा को भ्यागुतो कुवा मै हुन्छ । यत्रो संकटमा पनि तिमिले गाली गर्दै छोडेको घरलाई प्रचण्ड लगायतका धेरै ले बचाइ राखेका छन। गल्ती सबैका हुन्छन। अझै पनि तिमिमा धेरै जोश जागर बाकी छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। गल्ती स्विकार गरेर घर फर्क। तिम्रो पछि लागेकाहरु घर फर्किइ सकेका छन, तिमी मात्र एक्लै बरालिदा मलाइ पनि नरमाइलो लागेको छ।
तिमिलाइ खिन्नता र शरम लागेको भए चुपलागेर घरै भित्र बस्ने वातावरण मिलाउला, तुरुन्त फर्क। दोस्रो चुनाब पनि आइसकेको छ। यो चुनाबमा पनि पहिलो जस्तै तिम्रो बिजोग हेर्न मलाइ झन गाह्रो हुन्छ, त्यो भन्दा पहिल्यै मेरो अगालोमा आएर आफ्नो गल्तिको प्रायस्चित गर बाबुराम । घरका सबै बाट एकपटक लाई माफी दिने वचन दिन्छु। यो मौका चुक्यो भने तिमी फर्कने बाटो छैन। तिमी अप्ठ्यारो मा रोएको हेर्न सकिन।
बाकी रामराम मात्र ।
उही ममतामयी नेपाल माता।